एक महान् व्यक्तिको आत्मालाप - परिहास - नेपाल
एक महान् व्यक्तिको आत्मालाप
हरे ! कस्तो मान्छेको फन्दामा परिएछ । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट संख्याबारे उहिल्यै गरेको फैसला जम्मैले बिर्सिसकेका थिए । आज सबै पल्टिए । हुँदाहुँदा निर्मम नियतिका कारण पटक–पटक विवाह गर्न बाध्य भएको मेरो पीडा पनि अहिले हाँसोको विषय बन्यो । मानवीयताको मूल्य पनि हरायो दैव ! तीन–तीनवटी श्रीमतीको मृत्युमा यस्तो हाँसो हुँदा पत्नीहरुको मृतात्माले समेत सराप्यो होला । जुगौँअघि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति सच्याएको पनि आजैको जस्तो गरी उचालियो । हिजोसम्म भ्रष्टाचारी, दुराचारी भनेको मात्रै सुनेको थिएँ । आज त आफ्नै आँगनमा आएर औँलो ताकेर भ्रष्ट भन्छ । बल्लबल्ल मानिसले मेरो विगत बिर्सिएका थिए, यसलाई पक्रिएपछि सबै छताछुल्ल भयो । अब जेल हालौँ, उतै अनशन बस्छु भन्छ । बाहिर पनि अनशन नै बस्ने हो । जे गरे नि सुख नहुने । हे भगवान् ! यो भालुको कम्पटलाई कुन दिनमा पक्रन गइएछ !
यसो गर्दा कांग्रेस मान्ला कि ?
कमरेड मनाङेलाई पखाला
शंखधर साख्वा:को सुन